Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 25, 2020 00: 30 No Comments
Timaha sifiican ayey u kori karaan haddii aad dalbato talooyinkan:
Timahaaga ula dhaqan sidii geedo oo kale.
Biyaha kaga shub dabeyl wata maalin walbana qorraxda ku buufi.
Ha u qalloocin, dabeecadda ayaa kuu sameyn doonta adiga, iska daa iyaga inay koraan.
Saliida nooca dabiiciga ahi aad ayey u fiican yihiin, laakiin ma ahaisticmaalka kiimikooyin la'aan.
Cab biyo fara badan, cun khudrad fara badan iyo khudrad.
Sep29 08: 35